Faah Faahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa Qaraxii ka dhacay muqdisho + Ciidamo ku Geeriyootay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Faah Faahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa Qaraxii ka dhacay muqdisho +...
Faah Faahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa Qaraxii ka dhacay muqdisho + Ciidamo ku Geeriyootay
Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa Qarax geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo barqanimadii maanta ka dhacay bar gadiidka lagu hubiyo oo Ciidamada NISA, ay ku lee yihiin agagaarka Godka Jilacow.
Goob jogayaal ayaa inoo sheegay in ay arkeen dhimashada 5 Ruux oo u badan Askar katirsan Ciidanka Dowladda Soomaaliya, kuwaas oo yaallay goobta uu qaraxa ka dhacay.
Sidoo kale dadka dhintay waxaa ku jirta Gabar ka mid aheyd Saraakiisha Ciidanka Xoogga taa oo lagu magacaabi jiray Faay Cali Raage, iyo Seeygeeda oo gaariga la saarna, iyo Ciidamo ilaalo gaar ah u ahaa iyada.
Warar kale anu helnay ayaa sheegaya in qaraxa ay sidoo kale ku geeriyoodeen Dad shacab ah,kuwana kala ay ku dhaawacmeen,kuwaa oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn tiro ay yihiin.
Ciidamada Ammaanka ayaa goobta xiray kuwaas oo hakad geliyay isku socodka dadka iyo gadiidka goobta uu qaraxa ka dhacay,waxaana wali socda gurmad loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxa.
Wali laamaha amniga kama aysan ka hadlin qaraxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
Next articleDFS oo ka hadashay qaraxii ka dhacay Muqdisho